Indlela Yokuthotywa kweCoconut - Iingcebiso Kunye Neengcebiso
Indlela Yokuthotywa kweCoconut
Ikhokhonathi yenye yezo zithako endingenako ukwanela kuzo! Ndingahlala phantsi nesitya sekhokhonathi ethosiweyo kunye necephe, ndiyithanda kakhulu! Ifanelekile kwiipayi eziphezulu kunye namaqebelengwane, iikomityi kunye ne-ayisikrimu. Kakhulu nayiphi na idizithi!
Ukuthosa ikhokhonathi kunceda ngokwenene ukukhupha iincasa ze-nutty zekhokhonathi kwisitya osisebenzisa kuso, kwaye ngokwenene yinkqubo elula ngokwenene! Ukususela izitya ezifana iikeyiki zekhokhonathi , coconut banana cream pie , okanye oku isonka sebhanana yekhokhonathi , Ikhokhonathi ethosiweyo isoloko ingumnqobi wesidlo sangokuhlwa senkukhu!
Uyenza njani iCoconut
Uneendlela ezimbalwa onokukhetha kuzo xa kufikwa kwi-coconut yokuthosa yonke into edala incasa emnandi ye-nutty esiyithandayo! Uyakwazi ukugcoba i-coconut kwisitovu, kwi-oven okanye nakwi-microwave.
Kuzo zonke iindlela ezi-3, ndifumanisa ukuba umphezulu wesitovu usebenza ngeyona ndlela ingcono yokwenza i-toast elula.
Indlela yokuThoba iCoconut kwisitovu esiphezulu : Mhlawumbi eyona ndlela ilula kwaye eyona ndlela ndiyithandayo kukuthosa isitovu. Beka ngokulula i-coconut flakes yakho epanini kwaye ugxobhoze phezu kobushushu obuphakathi de zibe mdaka kakuhle. Qinisekisa ukuba ungawagqithisi amaqhekeza akho ekhokhonathi, okanye uya kulahlekelwa yincasa ye-nutty ozama ukuyitsala kubo.
Uyenza njani iCoconut kwi-oveni : Lungiselela i-baking sheet kunye nephepha lesikhumba kwaye ufudumeze i-oven yakho kwi-325 degrees F. Usasaze i-coconut yakho ngokulinganayo kwi-baking sheet kwaye ubhake imizuzu eyi-6-8, uvuselela i-coconut yakho phakathi ukuze ipheke ngokulinganayo.
Indlela yokugcoba iCoconut kwiMicrowave : Kwi-pinch, i-coconut inokugqwaliswa kwi-microwave. Sasaza ikhokhonathi yakho epleyitini kwaye uyifake kwi-microwave kwizithuba zemizuzwana engama-30 de igcadwe kakuhle. Ndifumanisa ukuba le ndlela yeyona inzima ukufezekisa i-toast elinganayo kwikhokhonathi yam, kodwa isebenza ngokukhawuleza ukuba kuphela kwendlela onayo!
Qaphela ukuba i-coconut enoshukela iya kuthotywa ngokukhawuleza kunesiqhelo, njengoko iishukela ziya ku-caramelize ngelixa ugcoba i-coconut! Lungisa amaxesha akho okupheka ngokufanelekileyo.
I-coconut ipheka ngokukhawuleza, kwaye kulula ukuyipheka. Nokuba yeyiphi na indlela oyisebenzisayo, qiniseka ukuba uyibeke iliso xa ipheka!
Kuyafaneleka ukuba uthathe ixesha elongezelelweyo lokuthobisa ikhokhonathi yakho ngaphambi kokuba uyifake kwisitya sakho. Kwenza umahluko omkhulu kwincasa!
Wakuba upholisiwe ungagcina ikhokhonathi yakho egcadiweyo kangangeenyanga ezimbalwa kwisingxobo esiqinile emoyeni kwindawo epholileyo eyomileyo.
Iiresiphi zeCoconut oza kuzithanda
Ultimate Coconut Cream Pie - EYONA Coconut Pie Ever!
Coconut Chews -Iresiphi kaMakhulu!
I-Coconut Pecan Pie
I-Chocolate Fudge Ripple Coconut Bars – Iphelele ekutyeni.
Coconut Sheet Cake -Isihlwele esithandwayo!
4.6ukusuka5iivoti ReviewIndlela yokupheka
Ixesha lokulungiselelaMbini imizuzu Ixesha Lokupheka3 imizuzu Ixesha elipheleleyo5 imizuzu IinkonzoNye Indebe Umbhali Holly Nilsson Ukuthosa ikhokhonathi kunceda ngokwenene ukukhupha iincasa zekhokhonathi kwisitya osisebenzisa kuso. Ukwenza iKhokhonathi eQongwe ngenene yinkqubo elula ngokwenene!
▢Nye indebe ikhokhonathi iqhekeziwe
Preheat ipani phezu kobushushu obuphantsi
Yongeza ikhokhonathi yakho ekroliweyo epanini
Gxuma rhoqo de ikhokhonathi ifikelele kwinqanaba olifunayo lokurhabula
Vumela ikhokhonathi yakho iphole ngokupheleleyo phambi kokuba uyisebenzise
Ukubhaka kwi-oveni: Lungiselela i-baking sheet kunye nephepha lesikhumba kwaye ufudumeze i-oven yakho kwi-325 degrees F. Usasaze i-coconut yakho ngokulinganayo kwi-baking sheet kwaye ubhake imizuzu emi-6-8, uvuselela i-coconut yakho phakathi ukuze ipheke ngokulinganayo.
Ukukhonza:Nyeoz,Iikhalori:283,Iicarbohydrates:12g,Iprotheyini:Mbinig,Amafutha:26g,Amafutha aGqithisiweyo:23g,Isodium:16mg,Potassium:284mg,Ifayibha:7g,Iswekile:4g,Ivithamin C:2.6mg,Ikhalsiyam:Shumi elinanyemg,Iayini:1.9mg
Imilitaria Izixhobo Zeski Izixhobo Malunga Social Networking Guitar Tabs I-Intanethi Ukhuseleko Iimiphumo
yeyiphi imibala oza kuyinxiba emtshatweni
indlela yokufumanisa ukuba umntu ubhubhile na
ipesenti yamadoda atshatileyo ayaqhatha
iisampulu iileta zezindululo zokufunda